Ulwandle lwaseCantabrian: izici, ukwakheka komhlaba, isimo sezulu kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
INyakatho yeSpain ilinyazwe yi Ulwandle lweCantabrian. Itholakala eduze nogu lwaseYurophu eNyakatho ye-Atlantic. Kuphethe futhi ukugeza ugu olusentshonalanga yeFrance. Inamanye amagama afana neBay of Biscay ngesiNgisi nangesiFulentshi njengeGolfe de Gascogne. Yindawo enamanzi acebile kakhulu ezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo futhi ingumthombo wokudoba indawo yaseSpain.
Kulesi sihloko sizokutshela ngazo zonke izici, i-geology kanye nokuhlukahluka koLwandle lwaseCantabrian.
2 Amachweba oLwandle lwaseCantabrian nesimo sezulu
3 Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zoLwandle lwaseCantabrian
Ulwandle olunokwandiswa okungamakhilomitha angama-800 ukusuka eCape Ortegal etholakala eGalicia, kuya ePunta de Penmarch eFrance Brittany. Yize ulwandle olungelukhulu kakhulu ngosayizi, lunokujula okuphezulu okushiwo. Futhi lokho kungukujula kwayo Ubuningi Round Round 4.750 metres futhi itholakala eCarrandi Trench, ngasogwini lwase-Asturian.
Njengoba siya endaweni esenyakatho kakhulu ngaseFrance, uLwandle lwaseCantabrian luyehla ngokujula. Inosawoti omaphakathi cishe wama-35 amagremu ngelitha ngalinye, yize iphansi kakhulu ngasogwini. Ikakhulukazi emilonyeni yemifula enamandla kakhulu njengeGaronne noma iLoire eFrance, usawoti uyancipha ngokuphawulekayo ngenxa yokulethwa kwamanzi ahlanzekile enziwa yile mifula.
Njengoba inikezwe usayizi wayo omncane, ithinteka kakhulu ngamagagasi. Kwesinye isikhathi amagagasi afinyelela kuma-amplitudes amamitha ayi-4.5. Umugqa olandelwe kulo lonke ugu ungunxande impela. Izici zomhlaba kuphela ezingagqanyiswa kulezi zindawo yiBay of Biscay, emngceleni weFranco-Spain, iCapes of Pañas, Ajo neMachichaco, kanye namabhishi aseSantander, Arcachon noma eLa Rochelle, phakathi kwabanye.
Iphinde igeze ogwini lweziqhingi ezisengxenyeni yaseFrance. Lezi ziqhingi yi-Oleron, Re, Yeu nezinye.
Amachweba oLwandle lwaseCantabrian nesimo sezulu
Sizohlaziya ukuthi yimaphi amachweba amakhulu oLwandle lwaseCantabrian:
Amachweba asogwini lwaseSpain: Lawa ngamachweba aseGijon, eSantander naseBilbao. La machweba amathathu anokuxhumana kwasolwandle neningizimu yeNgilandi nengxenye yeFrance.
Amachweba asogwini lwaseFrance: ngamachweba aziwa ngamagama eBayonne, iBiarritz, iSaint Jean de Luz neLa Rochelle.
Ngasogwini lwaseCantabrian kunezindawo eziningi zokungcebeleka ngasolwandle kanye namabhishi athile aziswa kakhulu ngabagibeli bamazwe. Futhi ngukuthi lapha kukhona umbuso wemimoya odala ukuvuvukala okuqinile okuphelele ukuya eningizimu.
Manje sizohlaziya isimo sezulu esikhona ezindaweni zaseLwandle lwaseCantabrian. Ebusika kule ndawo, izivunguvungu ezaziwa ngokuthi i-gale ne Zihambisana nemvula enamandla, imimoya namagagasi afinyelela kumamitha ayi-7 phezulu. Imvamisa igcina amazinga okushisa aphakathi nendawo unyaka wonke. Kodwa-ke, izinga lokushisa kwamanzi angaphezulu lisuka kuma-11 degrees ebusika laya kuma-22 degrees ehlobo.
Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zoLwandle lwaseCantabrian
Ukuthi amanzi olwandle ahlala ezinhlotsheni eziningi zezilwane. Kuyaziwa kakhulu ngokuba nezinhlobo eziningi zama-cetaceans. Phakathi kwezinhlobo ezaziwa kakhulu zama-cetaceans futhi ezifunwa umphakathi wezivakashi, sithola i-Cuvier's Beaked Whale, engavamile kakhulu olwandle lwaseYurophu. Ngaphezu kwalokho, ungabona ezinye zezinhlobo ze-North Atlantic Right Whale. Lokhu kunokuheha izivakashi, ngoba bekugcwele, kuyinhlobo ecishe yanyamalala emakhulwini eminyaka yokudoba ngokungakhethi kwabadobi bemikhomo baseBasque. Kunemithelela eminingi kwezemvelo, hhayi nje kuphela ngokudoba kwale mikhomo, kepha kungcoliswa kwamanzi nokucekelwa phansi kwemvelo.
Ezinye izilwane ezincelisayo zasolwandle ezigqamile kulolu lwandle whale whale, i-sperm whale, i-porpoise nezinye izinhlobo zamahlengethwa. Ebhange elingasempumalanga yechweba lomfula sithola indawo lapho kutholakala khona idwala le-limestone, eliyikarst engajwayelekile enezinhlobo eziningi nokuningi ngendlela yamavaults. Ngamunye lezi ziqongo zingamamitha angama-300-400 ukuphakama, izolo enye yazo itholakala iHermitage yaseSan Pedro de Atxarre.
Esinye sezihlahla ze-oki ezinkulu kunazo zonke futhi ezigcinwe kahle kunazo zonke olwandle lwaseCantabrian futhi umhlaba uthuthuka enhlabathini yelimestone. Kuyihlathi elijiyile, elidala futhi elithuthukiswe kahle eliyikhaya lomphakathi omkhulu wezilwane ezincelisayo. Njengoba kunikezwe ubukhulu bezimila, izilwane ezincelisayo zingavikela kangcono futhi zicashe ezinsongweni.
Phakathi kwezilwane ezincelisayo ezigqamile kuleli hlathi sinezingulube zasendle, i-mink, i-fox nezinyamazane ze-roe. Ngenxa yehlathi eliminyene, lingabanikeza inani elikhulu lama-acorn, izihlahla ze-sitrobheli nezinye izithelo zokudla nezindawo ezanele zokucasha.
Ekugcineni, sizohlaziya ukuthi yimaphi amabhishi amakhulu oLwandle lwaseCantabrian.
ILaida Beach: Kuyinto enkulu kunazo zonke esikhathini eside, kodwa ubukhulu bayo banciphile ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokulahleka kwezimila. Kwenziwa umzamo wokuvuselela le ndunduma, kepha yakhukhuleka ngemuva kwesiphepho solwandle ngawo-50.
Ibhishi laseLaidaxu: incane kunakuqala, kuze kuthi uma kunamagagasi aphezulu inyamalale ngokuphelele. Livikeleke impela futhi liyashisa ehlobo kule ndawo. Abaningi bathatha ithuba lokuya kuleli bhishi ngaphambi nangemva kwehlobo ngoba ligcina izinga lokushisa elimnandi impela. Kodwa-ke, imisinga iyavezwa, ngakho-ke kunamaboys okunciphisa ukubhukuda.
Ibhishi Larga: ingesinye sezihambele kakhulu izivakashi. Lakhiwe ngeCape Ogoño, elenziwa ngobuningi be-limestone obumbozwe yiCantabrian holm oak grove. Yehlela endaweni ephakeme ngamamitha angama-300 olwandle.
Ibhishi laseSan Antonio: Itholakala ngaphakathi echwebeni futhi inezindawo ezahlukahlukene ezahlukahlukene. Ngakolunye uhlangothi sinebhishi laseSukarrieta nesihlabathi sokuzenzela esakhiwa ngemuva kwe-ballad futhi esiqhelelene ngokuphelele kepha savela emanzini amakhulu. Kuyinto ebhishi eliyingozi ngandlela thile ngenxa yemisinga, kepha uma kunamanzi amancane kuvumela ukuhamba ukuya emaxhaphozini.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngoLwandle lwaseCantabrian nezimpawu zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ulwandle lweCantabrian